NAXDIN: PSG Oo Shaacisay In Fayraska Korona Laga Helay Mid Ka Mid Ah Xiddigaheeda Saacado Ka Hor Ciyaarta Atalanta & UEFA Oo Go'aan Gaadhaysa - Gool24.Net
NAXDIN: PSG Oo Shaacisay In Fayraska Korona Laga Helay Mid Ka Mid Ah Xiddigaheeda Saacado Ka Hor Ciyaarta Atalanta & UEFA Oo Go’aan Gaadhaysa
Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa ku dhawaaqday in hal kiis oo Fayraska Korona ah lagaga helay kooxdeeda tijaabadii caafimaadka ee ugu dambeeyey ee lagu sameeyey, saacado ka hor kulanka Atalanta ee wareegga siddeeda tartanka Champions League.
Kooxda reer France ayaa sida uu dhigayo sharciga ilaalinta badqabka ciyaartoyda ee kulamada Champions League ee ay dejisay UEFA, waxay mareen baadhitaankii caadiga ahaa ee lgu hubinayay xaaladda ciyaartoygeeda, laakiin waxa kaga soo baxday arrin ka nixisay oo ah in mid ka mid ah ciyaartoygeedu uu qabo xanuunkan.
PSG ayaa warbixin ay ku daabacday barteeda Twitterka waxay ku tidhi: “Baadhitaankii ciyaartoyda lagag qaaday xarunta tababarka, waxa uu muujiyey in mid ka mid ah ciyaartoydu uu qabo xanuunka KOFID 19.
“Iyadoo la raacayo sharciga ilaalinta caafimaadka, ciyaartoygan ayaa la geliyey karantiil oo laga dhex saaray ciyaaryahannada kale, waxaana si degdeg ah loo samayn doonaa baadhitaano kale.”
PSG may sheegin magaca ciyaartoyga laga helay caabuqa, hase yeeshee waxay xaqiijisay in la kansalay ciyaar saaxiibtinimo oo ay kula ballansanaayeen naadiga Versailles Club (N3) oo ay la ciyaari lahaayeen maalmaha soo socda.
Warbaahinta ayaa sheegay inay u badan tahay in ciyaartoygani aanu ka mid ahayn naadiga kooxda koowaad, nasiib wanaagna ay xiddigaha kooxdu ku sugan yihiin magaalada Lisbon oo ay caawa garoonka Estadio Da Luz kula ciyaari doonaan Atalanta.
UEFA ayaa la filayaa inay war kasoo saarto waxa laga yeelayo ciyaarta caawa ee Atalanta iyo PSG maadaama kooxda reer France ay shaacisay in ciyaartoy ka mid ah uu xanuunkan qabo, waxaana la ogaan doonaa go’aanka rasmiga ah ee ku aaddan haddii kulankani qabsoomi doono saacadaha soo socda.